वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण गर्ने साउँदलाई कडा कारबाही गर्न माग • Anumodan National Daily
वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण गर्ने साउँदलाई कडा कारबाही गर्न माग
धनगढी । गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्षलाई दलित भन्दै हातपात गर्ने सोही वडाका खडकबहादुर साउँदलाई कडा कारबाही गर्न दलित अगुवाहरुले माग गरेका छन् ।
वडा अध्यक्ष जंगबहादुर विकलाई वडा नं. ५ को मोहन्याल माविको व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको साउँदले मंगलबार हातपात गरेका थिए । १८ जना दलित अगुवाहरुले विहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पक्राउ परिसकेका साउँदलाई राजनीतिक दवावमा उम्काउन खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
वडा अध्यक्ष विकलाई जातिय विभेद हुने गरी गालीगलौच गर्दै साउँदले आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शी उदयबहादुर विकले बताए । उनले साउँदले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफूले भनेको मान्छे हुनुपर्ने भन्दै कुटपिटको प्रयास गर्नुका साथै गालीबेज्जति गरेको बताए ।
वडा अध्यक्ष विकको उजुरीमा साउँदलाई प्रहरीले बुधबार नै पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामा राखेको छ । साउँदमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिमको कारबाही गर्न माग गरेका छन् । कैलाली जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक आभुषण तिमिल्सिनाले साउँदमाथि सोही अनुसारको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही चलाइएको बताए ।
वडा अध्यक्ष विकका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको आकांक्षी ८ जना थिए । धेरै आकांक्षी भएको हुनाले पहिलो पटक सहमति जुट्न नसकेर दोस्रो पटक अभिभावक भेला बोलाइएको थियो । फेरि पनि आठ जनामा सहमति हुन नसकेपछि आठै जनालाई नराखी विकल्प खोज्ने सल्लाह भएको थियो । ‘साउँदले विकल्पमा धनबहादुर विकलाई अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेपछि सबैले धनबहादुरको पक्षमा ताली बजाएका थिए,’ वडा अध्यक्ष विकले भने, ‘त्यत्तिकैमा लक्ष्मण जनाला धनबहादुरको विरुद्धमा उठ्नुभयो । साउँदले जनालाको पक्ष लिंदैं मलाई आमाचाकरी गाली गर्दै आक्रमण गर्नुभयो । उहाँले … (लेख्न नमिल्ने) शब्दमा जातिय विभेद हुने गाली गर्नुभयो ।’
वडा अध्यक्ष विकले आफूलाई साउँदले यसअघि पनि स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले कुटपिट गरेको र अब उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्ने भनि काजग गरी माफी मागेको बताए । त्यसपश्चात पनि विभिन्न तरिकाले होच्याउने, जिस्काउने गरिहेको र पछिल्लो पटक पुन: आक्रमण गरेको बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य रुपबहादुर परियारले दलितका नेतामाथि आक्रमण गर्नाले समग्र समुदायलाई नै अपहेलना गरेको बताएका छन् । उनले नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरूले साउँदलार्इ रिहा गर्न माग गर्दै वडा नं. ५ काे कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकाे बताए । राज्यले कुनै पनि किसिमकाे दवावमा नपरी अाराेपी साउँदलार्इ कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलालीका अध्यक्ष चक्र विकले वडा अध्यक्ष विकमाथिको आक्रमणले दलितको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्नेले घटना गराएको बताए ।
केहि दिन पहिले गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १२ को जनप्रभात माविमा प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर नेपालीलाई विद्यालयको कार्यालयमा थुनेर गाली गलौच गरेको आरोपमा सोही विद्यालयका शिक्षक खगेन्द्रकुमार भण्डारीलाई प्रहरीले जातीय विभेद गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । गोदावरी ४ बाँसकोटाका भण्डारीलाई थुनामा राखेर प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो ।